युवराज गौतम - Saptahik Magazine
युवराज गौतमका लेखहरु
कोरिया : दु:ख धेरै, कमाइ मध्यम
भाषामा दख्खल, स्वास्थ्य र खानपानको हेरविचार, कोरियाली कानुनको सामान्य जानकारी बाहेक ‘हार्ड मसल’ भएका शारीरिक रूपका मजबुत नेपालीहरूले मात्र कोरियाका लागि तयारी गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
दीपावलीको आ–आफ्नै चलन
विदेशमा भएका नेपालीहरूमात्र नभै भारत, बंगलादेश, म्यानमार, बेलायत, अमेरिका, चीन, मलेसिया, कोरिया आदि देशमा हिन्दू तथा गैरहिन्दूहरूले दीपावलीलाई विशेष महत्वका साथ मनाउँछन् । यद्यपि दीपावली मनाउने तौरतरिका भने भिन्न छन् । कतिपय देशमा कुलदेवताको पूजा गरी नयाँ वर्षको स्वागत स्वरुप दीपावली गर्ने चलन छ ।
कहिल्यै पुराना नहुने दसैं गीत
हुनत दसैंको खुसी वा दु:ख दुवैलाई गीतमा उतार्ने चलन पुरानै हो । दसैं–तिहारमाथि प्रशस्त गीत रचना भएका छन् । दसैंका धेरैजसो गीतले परदेशमा रहेका र मुग्लान भासिएकाहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छन् । यद्यपि त्यस्ता सबै गीत स्थापित हुन भने सकेका छैनन् । बर्सेनि दसैंलाई नै लक्षित गरी अनेकौं गीत तयार भए पनि पुराना गीतहरूको दबदबा कायमै छ । कालजयी र मर्मस्पर्शी लाग्ने ती गीत वर्षौंदेखि बजिरहेका छन् ।
नेपालमा राजतन्त्र हटाउन भारतीय जासुस !
सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको तत्कालीन माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई फकाएर राजतन्त्र हटाउन भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’को विशेष भूमिका रहेको पुस्तकमा उल्लेख छ । रअकै पूर्व विशेष निर्देशक अमर भूषणले हालै सार्वजनिक गरेको उक्त पुस्तकमा पहिले राजतन्त्रलाई संवैधानिक बनाउन र पछि हटाउन गोप्य रूपमा भूमिका खेलेको कुरा बताइएको छ ।
विदेशमा रहेका हिन्दू धर्मावलम्बीहरू दर खाने कार्यक्रम तथा सांगीतिक कार्यत्रमको आयोजना गरेर तीजलाई उल्लासमय बनाइरहेका छन् । युरोप, अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जापान, यूके तथा खाडी देशहरूमा तीजका विशेष कार्यक्रमहरू तय भएका छन् । धेरैजसो देशमा तीजका भव्य कार्यक्रमहरू आयोजित भैरहेका छन् ।
तीज मनाउने स्वतन्त्रतामा अंकुश
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीले साउन २१ गते एक विज्ञप्ति निकाल्दै तीजको दर खाने नाममा अहिलेदेखि नै होटल र पार्टी प्यालेस बुकिङ गर्न सुरु गरिसकिएको जानकारीमा आएको भन्दै होटल–रेस्टुराँमा दर खाने, महँगा पोशाक प्रदर्शन गर्ने तथा ध्वनी प्रदूषण हुने कार्य नगर्न निर्देशन दियो ।
कमेडीमा हम जाएगा क्रेज
पेसाले ड्राइभर हम जाएगा चर्चित हुनुको पछाडि उनका चुट्किला नै प्रमुख हो । हिजोआज उनकै पथलाई पछ्याउन युवाहरूले सक्रियता देखाउन थालेका छन् । पूर्वी नेपाल तथा सिक्किम–दार्जीलिङमा उनको सिको गर्दै कमेडी शोहरू हुन थालेका छन् । काठमाडौं बस्दै आएकी गान्तोक सिकिक्मकी गायिका झरना गुरुङ हम जाएगाका चुट्किलाहरू खुबै रमाइलो लाग्ने कुरा बताउँछिन् ।
श्रावण ३२, २०७६
छोटो अवधिको प्राविधिक कोर्स
परीक्षा बोर्डले यो वर्ष सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार परीक्षामा सहभागी ४ लाख ७५ हजार विद्यार्थीमध्ये १७ हजार ५ सय ८० जनाले मात्र ३ दशमलव ६ देखि ४ जीपीए प्राप्त गरेका छन् । यी विद्यार्थीहरूका लागि नेपालमा पढाई हुने जुनसुकै स्तरका कोर्स पढ्न समस्या छैन । त्योभन्दा कम ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीले आफ्नो लक्ष्य अनुसार कोर्स छनौट गर्न नपाउने संभावना छ ।
प्राविधिक शिक्षाको ढोका ग्रेडले छेक्दैन
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड तथा स्थानीय सरकारको अनुमतिमा संचालित अन्य प्राविधिक कोर्सहरू पढ्न पनि कुनै बन्देज छैन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सूचना अधिकारी नारायण पोखरेलका अनुसार प्राविधिक कोर्स पढ्न एसईईको नतिजा बाधक बन्दैन तर ग्रेडिङमा चित्त नबुझे रिग्रेडका लागि पुनः परीक्षा दिने अवसर पाइन्छ ।
फराकिलो बन्दै प्राविधिक शिक्षा
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्ले हालसम्म प्राविधिक एसएलसी तह र तीनवर्षे डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहका कोर्सहरू सञ्चालन गरेको छ । भर्नाका लागि छनौट हुन अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, स्वास्थ्यजस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर प्रवेश परीक्षा दिनुपर्छ । प्रवेश परीक्षामा सामेल भएर प्रतिस्पर्धाका आधारमा तोकिएको कोटामा विद्यार्थी छनौट गरिन्छ ।
भारतीय निर्वाचनमा सेलिब्रेटीहरू
भारतमा कलाकार तथा खेलाडीहरूप्रति आममानिसको क्रेज लोभलाग्दो छ । सेलिब्रेटी कलाकार तथा खेलाडीहरू राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि सफल भएका प्रशस्त उदाहरण पनि छन् । निधन भैसकेकी सुप्रसिद्ध नेतृ तथा पूर्वअभिनेत्री जयराम जयललिता ‘अम्मा’ पाँच पटक तामिलनाडुकी मुख्यमन्त्री भएकी थिइन् ।
करिब एक वर्षयता माक्र सत्रिय भएका यस्ता क्लबमा आबद्ध युवाहरूले ख्यालख्यालमा सुरु गरेको कमेडी सामाजिक संजाल तथा युट्युबमा हिट भएपछि ओपन शो तथा रेस्टुराँहरूमा समेत जम्न थालेका छन् र दर्शक तथा ग्राहकहरूलाई मरुन्जेल हँसाइरहेका छन् । रेस्टुराँ तथा बारमा हामी हप्ताको दुई दिन प्रस्तुति दिइरहेका छौं
एसईईपछिको फुर्सदमा के गर्ने
परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएपछि के पढ्ने र कहाँ पढ्ने ? यससँग सम्बन्धित सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । एसईईपछिको शिक्षा कुन कलेज वा कुन ठाउँमा पढ्ने सोच्न–बुझ्न थाल्नुपर्छ । यो समयमा धेरै भन्दा धेरै व्यक्तिसँग भेटेर आफूले अध्ययन गर्न चाहेको विषयका परामर्श लिनुपर्छ । भविष्यमा कुन विषय रोज्ने, त्यसको प्रवेशसम्बन्धी प्रक्रियाहरू के–के छन बुझ्नुपर्छ ।
एक महिनादेखि सबै काम छाडेर परीक्षाको तयारी गरिरहेकी करिश्मालाई सयौं शुभेच्छुकले सामाजिक संजाल एवं फोनमार्फत सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए । आफ्नै कार हाँकेर परीक्षा केन्द्र पुगेकी मानन्धरले विद्यालय तह पार गर्ने उद्देश्यले मात्र परीक्षामा सहभागी भएको बताइन । पढ्नका लागि उमेर बाधक नहुने प्रमाणित गर्न चाहेको पनि उनको तर्क छ ।
चैत्र १६, २०७५
खुला विश्वविद्यालय अनलाइनमै शिक्षक, अनलाइनमै विद्यार्थी
कार्य व्यस्तताका कारण नियमित कलेज वा विश्वविद्यालयको कक्षामा सहभागी हुन नपाएका, ग्रामीण क्षेत्र वा विदेशमा बसोबास भएका, बीचमै पढाइ छुटेका, आफूमा प्रतिभा, क्षमता एवं अनुभव भएर पनि कलेजको शिक्षा लिन नसकेकाहरूका निम्ति खुला विश्वविद्यालय सजिलो माध्यम बन्न पुगेको छ ।